Shir saddex geesood ah oo ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Shir saddex geesood ah oo ka dhacay Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif , iyo Madax-weynayaasha Puntland iyo Jubbaland, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa maanta kulan Saddex geesood ah ku qaatay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam ‘Madobe’ oo dhawaanahaan ku sugnaa Muqdisho, una yimid ka qayb qaadashada shirka wada tashiga ee Beesha Caalamku qababqaabisay ayaa kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Muqdisho.
MW, hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo hadda ah hoggaamiyaha xisbiga Himilo Qaran iyo guddoomiyaha Golaha Midowga Murashixiinta ayay Madax-weynayaasha Puntland iyo Jubbaland kulan kula qaateen maanta Muqdisho.
Sida ay dhinacyadu caddeeyeen, kulanka waxaa looga hadlay, sidii xal looga gaari lahaa khilaadka ragaadiyay arrimaha doorashooyinka, iyo sidii looga gudbi lahaa darbiga ku hor gudban, helidda heshiis lo dhan yahay.
Mucaaradka uu hoggaamiyo Sheekh Shariif ayaa isku dayaya in ay qeyb ka noqdaan shirka wadatishiga, haddii taasi u suura gali weyso, waxa ay ku dadaalayaan in ay aragtidoda u gudbiyaa Madoobe iyo Dani oo ay u arkaan masuuliyiin la aamini karo.
Madaxweynayaasha HirShabeelle iyo Galmudug oo matala inta badan siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa la safan Farmaajo, waxayna Murashixiintu hore u sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen Qoor-qqor oo mar isku dayay inuu waan-waan sameeyo.